Vehivavy Filoha Voalohany Ao Shily · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Septambra 2017 3:49 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra teny anglisy nivoaka tamin'ny marsa 2006)
Mientanentana be i Shily. Sambany nisy vehivavy voafidy ho filoham-pirenena ary miresaka momba izany izahay; eny an-dalambe, amin'ny radio, amin'ny fahitalavitra ary amin'ny bilaogy. Nanomboka androany tamin'ny lanonana natao tao amin'ny tranoben'ny kongresy Shiliana, ao Valparaíso ny fe-potoam-piasan'ny filoha mandritra ny 4 taona. Maherin'ny 70 ireo solontena iraisam-pirenena (anisan'izany ireo filoham-pirenena) nanatrika ny lanonana.
“El Morrocotudo” (ES) namoaka fomba fijery feno fihetseham-po, ahitana ny antsipiriany momba ny hiakan'ny olona tamin'ny filoha Michelle Bachelet “Miaraka aminao izahay Bachelet!”, tamin'ny fiandohan'ny lanonana sy ny fanaovam-beloma ny filoha teo aloha Lagos. Hita any amin'ny faran'ny lahatsoratra ny lisitra tena mazava momba ny zava-misy an'ohatra (saimbôlika) an'ity hetsika manan-tantara ity.
“Peridismo Global” (ES), manasongadina ny lahateny fanaovam-beloma nataon'ny filoha teo aloha Lagos, izay nilaza momba an'i Bachelet hoe “Marika amin'izao vanim-potoana iainantsika izao izy, ao amin'ny firenena izay nifindra fanamby vaovao, fiarahamonina izay manana fiovana goavana, amin'ny alàlan'ny fahalalahana, ny fahamaroana, ny fanamby ary ny fitoviana tantana. “
“Ciberamerica” (ES), manindry ny andraikitr'I Shily: “Na dia fanohanana lehibe aza ireo filoham-pirenena sy solontena vahiny tonga nanatrika, mampiditra ny firenentsika amin'izao tontolo izao izy ireo. Ankehitriny, tsy maintsy mampiseho vokatra tsara kokoa isika, tsy misy olona te-hahalala fihemorana. “
“Itaxac” (ES) namoaka lahatsoratra momba ireo vahiny iraisampirenena nanatrika ny lanonana tao amin'ny “Republican Fest (Fetibe Repoblikana)”. Mizara amintsika izy fa manana fihetseham-po hafahafa, izay mampahatsiahy ny fotoana nahazoana ny demaokrasia tamin'ny taona 1998.
Azo jerena ao amin'ny bilaogy Libardo Buitrago (ES) ny famintinana tsara mikasika ny mombamomba an'i Michele Bachelet.
Amin'ny fanadihadian'ny gazety Shiliana momba ny lanonana, tsindrio eto.
Bilaogin'ny Filoha Michelle Bachelet
Manana bilaogy ofisialy roa i Michelle Bachelet: ny bilaogy fanentanana (ES), natao ho an'ny fiarahamonina izay manohana an'i Bachelet, sy ny bilaogy (ES) izay mifototra amin'ny fanoloran-tenany amin'ny teknolojian'ny fampahalalam-baovao sy ny fifandraisana. Natao ity bilaogy ity mba hampahafantarana izay hitranga any amin'izany toerana izany mandritra ny fitondrany.